Lego Star Wars ၇၅၃၁၂ Boba Fett ၏ Starship ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ
Lego Star Wars 75312 Boba Fett's Starship ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Boba အတွက် ၀ ယ်ပါ၊ Slave I တွင်နေပါ
26 / 06 / 2021 03 / 08 / 2021 ရော့ Paton 2137 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75243 Slave I - နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ဝေမှု, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, Boba fett, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, reviews, ငါကျွန်, အဆိုပါ Mandalorian
75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Lego Star Wars သင်ယခုဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ယခုမသိသေးကြောင်းကျွန်ပြုခဲ့သည်။
၎င်းသည် 2019 ၏အရေအတွက်အပိုင်းတစ်ဝက်တွင်ရောက်ရှိနိုင်သည် 75243 ငါကျွန် - 20 နှစ်မြောက် Edition ကို, ဒါပေမယ့် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship နောက်ဆုံးဥပမာ - ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Lego Star Warsဘတ်ဂျက်တစ်ဝက်ရှိမော်ဒယ်များတွင်တူညီသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်များ၊ ကစားနည်းများနှင့်လုံး ၀ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကိုဖန်တီးရန်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်။
မင်းဒီ p ကိုကျော်ပြီးကြည့်ရတော့မယ်artဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငွေပေးချေမှုနှင့်အညီအသက်ရှင်လျှင်တောင်ဒီအစုတွင်ပါဝင်သော icular အသေးစား 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အများဆုံးအထူးတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Star Wars မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအစုံ။
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 အပိုင်းပိုင်း: 593 အသေးစားပုံများ: 2
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အားလုံးအများကြီး။ သော်လည်း LEGO ၏ထောမနာသီချင်းဆိုခြင်း Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာအချို့၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်နှင့်အဓိကဒီဇိုင်းအချက်များအားလုံးကိုထိရောက်စွာဖြတ်တောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးကျွန်စနစ်အတွက်အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကိုမရရှိခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုရိုးရှင်းစွာအခြေပြုထားခြင်းဖြစ်သည် ( ဖတ်ပါ: လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်း) နှင့်အတူလုယူခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရှိပါတယ် 75243 ငါကျွန် - နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ UCS-set-that-not-a-UCS-set လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုထူးခြားစွာသဲသဲမဲမဲရိုက်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီး built-in လက်ကိုင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဆင့်ကိုပင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ တူညီသောသင်္ဘော၏မည်သည့် version ကိုမဆိုထုတ်လုပ်ရန်အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထိုအရာနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်တော်တို့သည် 2018 ၌ ၇၅၂၂၂ သစ္စာဖောက်မှုတိမ်တိုက်၌ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောပိုင့်အရွယ်ကျွန်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည် City။ ၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းပြီးထို Diorama အစုံအတွင်းရှိနေရာအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ထိုလမ်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။artအဘို့အသေးငယ်အစုံ၏တပြင်လုံးကိုဖန်တီးမှု ဦး တည်ချက် ed Lego Star Wars သူတို့မကြာသေးမီကပြောသည်အဖြစ်, အဖွဲ့ Brick Fanatics အင်တာဗျူးအတွက်။
သို့သော်ငါကျက်သရေရှိခဲ့သည့်ထိုသေးငယ်သောကျွန်အတွက်၎င်းသည်အချိုးအစားတစ်ခုလုံးရှိနေစဉ်၎င်းသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရလောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာတွင်များစွာမရှိခဲ့ပါ။ Slave I သည်ပိုမိုကြီးမားသော set တွင် gimmick ကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းအမှန်တကယ် standalone set တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သည့် version ကိုမဆိုတူညီသောပြissuesနာများမှခံစားရလိမ့်မည်။
သို့တိုင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှထူးခြားသည်ကိုပြောပြရန်စကားလုံးများကိုရှာရန်ရုန်းကန်နေရသည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဟုတ်တယ် ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျွန် ၁ ၏အသေးစိတ်၊ တိကျမှု၊ ကစားခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းပျော်ရွင်မှုကိုယူပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် Cloud ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည့်သေးငယ်သည့်အရွယ်အစားတစ်ခုအဖြစ်ထုပ်ပိုးထားသည်။ City ကျွန်ငါ (နှင့်ကျေးဇူးတင်စရာကြောင်းတစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည်) ။
စိတ်ဝင်စားစရာ 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အတူတူအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Lego Star Wars နောက်ကွယ်မှဒီဇိုင်နာ 75243 ငါကျွန် - နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ဝေမှု - ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာ Michael Lee Stockwell နှင့်သူရှင်းပြခဲ့သည် Brick Fanatics the partသူကသူ့ရဲ့ပိုကြီးတဲ့အရင်ကကဲ့သို့ဒီဇိုင်းအချက်များအားလုံးထိသည်ကိုသေချာစေရန်သူပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအလုံအလောက်ရိုးရှင်းပေမယ့်ပုံစံကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာသူနဲ့သူရဲ့ကျန်အရာအားလုံးကိုဖန်တီးပေးတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုပါ။ Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့်အတူအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဒါထူးခြားတဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်။
နည်းများစွာဖြင့်ထိုသို့ဖြစ်သည် 75243 ငါကျွန် - နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ဝေမှု (သို့) ၂၀၁၅ ၏ UCS 20 Slave I ကိုပင်တည်ဆောက်နေစဉ်စိတ်ထဲထားရမည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာနှင့်တင်းကျပ်သောအဆောက်အအုံတွင် ဦး တည်ချက်အပြောင်းအလဲများနှင့်စပ်စုသည့်ထောင့်အမျိုးမျိုးတို့တွင်ထုပ်ပိုးခြင်း၏တူညီသောစရိုက်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'တင်းတင်း' ဟူသောဝေါဟာရကိုအတော်လေးတမင်တကာအသုံးပြုသည်၊ Lego Rok Žgalin Kobe သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိခဲ့သောအရာများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်အုတ်နှင့်အပိုင်းအစတိုင်းတာခြင်း Architecture ခေါင်းစဉ်။ ၎င်းသည်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည်အချက်နှစ်စုံတွင်သင့်အားတည်ဆောက်ပုံတွင်အတူတကွထားခြင်းသည်မည်မျှတိကျမှုပေါ် မူတည်၍ ပုံစံ၏ကဏ္sectionsများကိုအတူတကွအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းနီးပါးရှိသည်။
ဤမျှအလွန်တိကျသောချဉ်းကပ်နည်းသည် ၅၉၃ ၏အပိုင်းအစတစ်ခုကမည်သို့ဖန်တီးသည်ကိုအံ့သြရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် Lego ထိုကဲ့သို့သောအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား၏မော်ဒယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာ 75315 Imperial အလင်း Cruiser အနုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်တစ်ခုအတွင်း၌ပင်ထိုအဓိပ္ပာယ်ကိုအတူတူထားရှိခြင်း၌တန်ဖိုးကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship။ နောက်ဆုံးအပိုင်းဘယ်လောက်အတိအကျ၊ ဘယ်လိုဘယ်ပုံလဲဆိုတာကိုသင်သိပြီးတွေ့နိုင်သည် Lego Star Wars အဖွဲ့ရည်ရွယ်သည် - ၎င်းသည်ယခင်ရှိခဲ့သည့်ပိုကြီးသောကျွန်ကဲ့သို့တူညီသောအကွက်များကိုအမှန်ခြစ်ပေးသည်။
၎င်းသည်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘဲ p အပါအ ၀ င်မည်သည့်ထောင့်မှမဆိုသင်္ဘော၏ profile များဖြစ်သည်artသင်္ဘောကိုယ်ထည်၏ icular ထောင့်; မီးခိုးရောင်နှင့်သဲအစိမ်းရောနှောမှု၏ပုံစံတစျခုလုံးကိုအနှံ့အရောင်၊ အနီရောင်အောက်ပိုင်းအပိုင်း၏ဆင်ခြေလျှောများနှင့်အချို့သောနေရာများတွင်စတစ်ကာများပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိသောအပိုင်းတစ်ခုစီ၏အချိုးအစား၊ သငျသညျသင်္ဘော၏ထောင့်ကိုပြောင်းလဲအဖြစ်ရွေ့လျားအတောင်ပံ; ကာဗွန်နိုက် - အေးခဲနေသောပမာဏအတွက်သိုလှောင်ရန်နေရာပင်ရှိသည်။
ဒါအားလုံးဟာမျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတွေအတွက်အတူတကွလာတာပါ Lego Star Wars မကြာသေးမီကအကြိမ်များ - ဤအရွယ်အစားနှင့်၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အလားတူလတ်ဆတ်သော၊ ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားကြီးမားသည့်ပုံစံများဖြင့်မကျေနပ်မှုနှင့်စိတ်ပျက်စရာများရှိသင့်သည်။ အဲဒီအစား၊ ဒါကခင်ဗျားမသိတဲ့နောက်နည်းတစ်နည်းပဲ Star Wars၄၄ နှစ်တာသမိုင်းကြောင်းမှအထင်ကရသင်္ဘောကြီးများ။
ဒါ့အပြင်ဒီအရွယ်အစားနဲ့ display stand တစ်ခုရဲ့အပိုဆုကြေးအသစ် (အနည်းငယ်မောင်းနှင်နိုင်သည့်ဝန်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ်ပါးနပ်စွာထည့်သွင်းထားခြင်း) ဖြင့်၎င်းသည် display ကိုစွန့်ခွာ။ ကစားခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအတွက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသော Slave I version ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူ။
အဲဒီမှာအများကြီးထုပ်ပိုးရှိပါတယ် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဒီစကေးမှာဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်သင့်သောအရာကိုအထက်မျှော်လင့်ချက်များကယ်တင်တတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့မှာပိုများနိုင်သည် Lego Star Wars ဤကဲ့သို့သောအစုံကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်ရွေ့လျား?
အတော်လေးသိသာဖို့ကန ဦး မဲနှိုက် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အများစုအတွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Lego အားလုံးသတ်မှတ်ထားပေမယ့်နာမည်ပြ, ပြန်လာကျေးဇူးမုဆိုး, ထိုသို့အကြောင်းအဆိုးမြင်ဖြစ်ဖို့ဘာမျှမ - ရုံသူ့ကိုကြည့်ရှုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရေရှည်အတူဇာတ်ကောင်သည် Lego Star Wars ၂၁ နှစ်ကျော်ကြာအောင်ဆွဲဆန့်ခဲ့သောကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောခမောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်သံကြိုးများမှယခုအောက်ရှိဝတ်ဆင်ထားသည့်အနက်ရောင်သင်္ကန်းများအထိအသစ်သောအသွင်အပြင်သစ်ကိုခံစားခွင့်ရရှိရန်အတော်လေးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ထားသောလက်များနှင့်ခြေထောက်များသည်လက်ရာကိုဖြည့်စွက်။ သေချာစေရန်ကူညီသည် Lego အဆိုပါ Mandalorian မှအဟောင်း Boba Fett ၏ minifigure ဗားရှင်းပရိတ်သတ်တိုင်းလိုချင်သည်အတိအကျဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် Blaster ရိုင်ဖယ်နှင့် Beskar လှံကိုနှင့်ပြည့်စုံ Mando ၏ Beskar- သံချပ်ကာဗားရှင်းလည်းပါဝင်သည်။ လှပသောဒီဇိုင်းပုံစံသည်အလွန်သေးငယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်တူသည်၊ ခမောက်၏ပုံသဏ္beာန်သည်မီလီမီတာ၏နှစ်ပုံတစ်ပုံမည်မျှမည်မျှကြီးထွားလာသည်ကို မှလွဲ၍ သူမတိုလွန်းပါ။
£ 593 / $ 44.99 / € 49.99 တွင်စျေးနှုန်း ၅၉၃ ခုနှင့်အသေးစားပုံစံ ၂ ခုဖြစ်သည် Lego Star Wars'ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတန်ဖိုးအဆင့်သို့ပြန်သွားပါ - စartSequel Trilogy အစုံနှင့်အတူ icularly - အတန်ငယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခဲ့သည်။
တန်ဖိုးနှင့်အထွေထွေတိုးတက်မှုကိုကိုက်ညီမှုရှိခြင်း Lego ၏အဆင့်မှာမော်ဒယ် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ဒီဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်၊ ဝယ် - ဖြန့်ချိထားတာဖြစ်တယ်။
၏ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံ 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ် Boba Fett အသစ်၏မျက်နှာသာအတွက်ပုံစံကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဟာတွေကအမှားအယွင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အပေါ်ထားရှိမျှော်လင့်ချက်များအပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်လုံလောက်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် Lego Star Wars ၎င်း၏အရွယ်အစားကိုနှစ်ဆသတ်မှတ်သည် - ၎င်းသည်စျေးနှင့်ရောင်းဝယ်မှုအရေအတွက်ကဲ့သို့မှန်ကန်ရန်မလိုအပ်၊ မှန်ကန်ရန်လည်းမလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံမှု၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego Star Wars အဖွဲ့သည်သူတို့ထုတ်လုပ်သောမော်ဒယ်တိုင်းကိုယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်တော့်ကိုသင်လျစ်လျူရှုထားနိုင်မည်ဟုထင်မြင်သောကျွန်ပြုသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်္ဘောကိုချစ်မြတ်နိုးရန်အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရုံသာမကဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုရင်ပိုမိုကျယ်ပြန်သည့်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ Lego အခြားအဘယ်သူမျှမကဲ့သို့ဖန်တီးမှုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75312 Boba Fett ရဲ့ကြယ်ပွင့်?
တည်ဆောက်ရန်တစ်နာရီကျော်ကြာသည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ကြာကြာအတွေ့အကြုံဆောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ဤသည်အတူတူထားရန်အနုစိတ်မော်ဒယ်တစ်ခုနှင့်လည်းပျော်မွေ့ရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75312 Boba Fett ရဲ့ကြယ်ပွင့်?
အပိုင်း ၅၉၃ ခုပါ ၀ င်သည် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starshipနှင့် Mandalorian ရှိသူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သော Boba Fett အတွက်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုအပါအဝင်အသေးစားပုံစံနှစ်ခု။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75312 Boba Fett ရဲ့ကြယ်ပွင့်?
၎င်း၏ display ကိုရပ်ပေါ်မှာထိုင် 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အရှည် ၂၉ စင်တီမီတာ၊ အနက်အနက် ၁၈ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၂၀ စင်တီမီတာရှိသည်။ အလျား ၂၁ စင်တီမီတာနှင့်အမြင့်ဆုံး ၁၁ စင်တီမီတာကိုအမြင့်ဆုံးနေရာအထိရောက်ရှိသည့်နေရာသည်ဆင်းသက်ခြင်းပုံစံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ထည်အဆုံး၌အမြွှာ Blaster အမြောက်များ၏ထိပ်များဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ကုန်ကျစရိတ်?
75312 Boba Fett ရဲ့ Starship ယူကေတွင်ပေါင် ၄၄.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ နှင့်အီးယူမှယူရို ၄၉.၉၉ မှစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီဈေးနှုန်းကအတူတူပါပဲ 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်အရွယ်အစား၊ ဒီဇိုင်းပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။
တစ်ခုမှာ "Lego Star Wars 75312 Boba Fett's Starship ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Boba အတွက် ၀ ယ်ပါ၊ Slave I တွင်နေပါ"
Slave အသစ် ၁ ခုရဲ့မင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါကငါ့ရဲ့ပထမဆုံး LEGO ဘဲ star wars ၁၅ နှစ်အကြာတွင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ ၁၅ နှစ်ကြာ LEGO hiatus မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယမြောက် LEGO set ကိုသာ (ယခုထိငါ ၀ ယ်ခဲ့သည့်အခြား set မှာ Barracuda Bay အသစ်ဖြစ်သည်။ )
မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုအတိအကျဖမ်းယူတဲ့အတွက်မင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုငါကြိုက်တယ်။ ဤ Slave 1 သည်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ငရဲကဲ့သို့ကြံ့ခိုင်သည်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်း LEGO လက်ရာများ၏အကောင်းဆုံးနှင့်ပြည့်စုံသောကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုငါသဘောကျတယ်။ - Lars